]Suite ngwá ụlọ nlereanya ime ụlọ - ụlọ oriri na ọṅụṅụ ụlọ oriri na ọṅụṅụ
TRINITY na-enye ihe ngwọta arịa ụlọ zuru ụwa ọnụ maka oghere mkpokọta.
Ụlọ nkwari akụ Project
Ngwongwo Mpaghara Ọhaneze / Akụrụngwa rụrụ arụ
Ụlọ oriri na ọṅụṅụ Project
Ụlọ ihe nlereanya
Suite nlereanya ụlọ - Commercial hotel ngwá ụlọ
Suite furniture model ụlọ - ụlọ oriri na ọṅụṅụ custom furniture
Suite nlereanya ụlọ - hotel ụlọ ngwá ụlọ nchịkọta
Suite ngwá ụlọ nlereanya ụlọ - oge a hotel ngwá ụlọ ụlọ ọrụ
Suite ngwá ụlọ nlereanya ime ụlọ - ụlọ oriri na ọṅụṅụ ụlọ oriri na ọṅụṅụ
isiokwu: arịa ụlọ nkwari akụ.
Ụdị ngwá ụlọ: Ụlọ nkwari akụ.
Ojiji a kapịrị ọnụ: ọnụ ụlọ nkwari akụ.
Ngwa: Hotel,Resort,Ụlọ ọrụ,Villa,ụlọ oriri na ọṅụṅụ,Ndị ọzọ ọha obodo.
Ụdị Nhazi: Nhazi oge a.
Ihe: osisi siri ike, Panel, akpụkpọ anụ, ákwà, igwe, marble.
Anyị nwere ike hazie dị ka ihe ị chọrọ. ma ọ bụrụ na ịchọrọ nkọwa mmefu ego ziri ezi, biko zitere anyị ajụjụ.
Ụdị Qty Nha(MM)
Isi ihe ndina 1 2230*2100*220
Tebụl e dere ede 1 1800*600*760
Onye isi oche 1 655*645*1130
Sofa / oche oche
Ụkwụ Ottoman / Sofa 1 600*400*450 / Dia600*400
TV Bench / Mgbidi TV 1 2000*550*770
Akụkụ Cabinet 1 1200*400*750
Wardrobe nwere Obere mmanya
Ngosi ogologo zuru oke 1 1200*10*800
Akpa akpa 1 950*600*550
Ọnụ ụzọ ụlọ ịsa ahụ
Ihe efu 1 1100*520*480
Ọnụ ụzọ mbata 1 900*2000*50
Banyere Atọ n'Ime Otu
Foshan TRINITY Hotel Furniture Co., Ltd. na-enye ihe ngwọta ngwá ụlọ zuru ụwa ọnụ maka ụlọ oriri na ọṅụṅụ 5-Star, ebe ntụrụndụ, Ụlọ ọrụ na oghere mkpokọta dịka ụlọ oriri na ọṅụṅụ na ụlọ ọha.
Mgbe afọ nke mmepe,TRINITY(ZHONGSEN) aghọwo a nnukwu ahaziri hotel oru ngo ngwá ụlọ, na osisi nke 30,000 square mita na karịa 250 ọrụ.Production ngwá nwere Advanced Italian woodworking numerical akara ọnwụ igwe, BaiSheng ika osisi steamed akọrọ akụrụngwa, Belgium ziri ezi mpempe push igwe, Mars elu na-agbagharị agbagharị gong igwe, ChuangLing ihe feeder, slicer igwe wdg .. hotel ụlọ ngwá ụlọ mmepụta ike nke ihe karịrị 1000 sets.
Ọrụ Nhazi CAD
Ndị na-emepụta ngwá ụlọ anyị ga-arụ ọrụ na gị iji mepụta ụlọ oriri na ọṅụṅụ na-adọrọ adọrọ. Ndị na-emepụta anyị na-eji ngwugwu ngwanrọ SolidWorks CAD na-emepụta atụmatụ bara uru nke mara mma ma sie ike.
Ntụle ubi& Ọrụ nkwụnye n'elu saịtị
Ndị na-ahụ maka ọrụ anyị nwere ahụmahụ nke ọma n'ịleba anya na ebe ọ dị mkpa, ndị na-ahụ maka ọrụ anyị nwere ahụmahụ zuru ezu iji mee nha site n'onwe ha n'ebe ahụ iji hụchalụ nsogbu ọ bụla nwere ike ime, ma dozie ya n'ụzọ ọ bụla.
Ọ bụrụ na ọ dị mkpa, anyị nwere ike ịhazi otu ọkachamara n'ime ime ụlọ na saịtị ahụ ma nye ọrụ nrụnye na nrụnye na saịtị, iji hụ na ụlọ oriri na ọṅụṅụ gị na-emeghe na ọnọdụ zuru oke.
4 ruo 5 kpakpando nkwari akụ / ebe ntụrụndụ / villa / ụlọ ọrụ ọkọlọtọ ime ụlọ dị ka ihe ndina, okpokoro isi, tebụl bed, panel mgbidi TV, uwe mwụda nwere obere mmanya, tebụl tii, kabinet, ọnụ ụzọ wdg.
Ngwongwo ụlọ nkwari akụ, arịa ụlọ nkwari akụ, arịa ụlọ ọha (ọnụ ụlọ nkwari akụ / ụlọ oriri na ọṅụṅụ / ụlọ mmanya / ebe ezumike / ụlọ nzukọ / arịa ụlọ dị n'èzí wdg) dị ka sofa, oche ntụrụndụ, oche nnabata, tebụl iri nri, oche iri nri, ogwe mgbidi osisi wdg. ..
Raw Ihe onwunwe
1.Bịakwute anyị na atụmatụ gị na nkọwa zuru ezu, anyị ga-arụ ọrụ na ha ma ọ bụ weta ọhụụ ị na-eche n'uche na akwụkwọ.
2.Anyị ga-eme ike anyị niile iji nye gị ihe ndị na-ezute nkọwa na mmefu ego gị.
3.After na-akwado nkwekọrịta ahụ, anyị ga-emepụta mpempe akwụkwọ maka arịa ụlọ gị ma na-eme nyocha oge tupu nkwenye maka mmepụta nnukwu.
4.With anyị na-achịkwa n'ichepụta na àgwà, anyị na-enwe ike hụ na àgwà nke ọ bụla otu mpempe na-apụta na anyị factory.
5.To ịzọpụta gị nsogbu nke njikwa ngwaahịa site na isi mmalite dị iche iche, anyị na-enye ụlọ ọrụ anyị dị ka ebe nchekwa nchekwa na mbupu. Anyị na-ebuga n'ebe ọ bụla n'ụwa.
6.We kwenyere na ngwaahịa anyị dị mma, nkwa nke ihe karịrị afọ 5 na-enye ihe niile anyị na-arụpụta.
Foto otu ndị ahịa
1.What bụ gị kacha nta iji ibu?
A: Ọ dabere na ụdị ngwá ụlọ gị, dị ka oche ụlọ oriri na ọṅụṅụ ọ dịkarịa ala 50 iwu, nke kacha nta nke ngwá ụlọ na ụlọ nkwari akụ bụ 10 sets.
2.E nwere ụlọ ngosi ihe ngosi na ụlọ ọrụ mmepụta ihe?
A: Ee, banyere 3000 square showroom bụ anyị factory. Enwere arịa ụlọ dị iche iche maka ntụnye aka gị, dị ka arịa ụlọ ime ụlọ, arịa ụlọ dị n'èzí, arịa ụlọ oriri na ọṅụṅụ, na ihe karịrị ụdị ịchọ mma iri dị iche iche nke arịa ụlọ ime ụlọ oriri na ọṅụṅụ na ihe ndị ọzọ.
3.Ị nwere ike ịnye ngwọta ngwá ụlọ nkwari akụ?
A: Ee, anyị ga-adaba n'echiche gị, dakọtara na ụdị ihe ịchọ mma ịchọrọ, yana ụdị ọrụ ụlọ nkwari akụ niile nke kpakpando ka ị na-ezo aka ma melite echiche gị. Enwere ike ịhazi nha arịa ụlọ niile dabere na ohere dị na họtel gị.
4. Ogologo oge ole ka oge nnyefe gị dị?
A: Mgbe anyị na-akwụ ụgwọ nkwụnye ego nke 30%, akụkụ abụọ ahụ kwadoro eserese, wee mepụta ihe atụ, ma gosi na ha ziri ezi. Mbupu ga-ewe 30-60 ụbọchị.
5.Kedu ụdị okwu ịkwụ ụgwọ ị na-enye?
A: Anyị nwere ike ịnye usoro ịkwụ ụgwọ niile, dị ka T / T, L / C, ntụkwasị obi, na ndị ọzọ.
Onye ana-kpo: Ms.Vivi.
Mob/Anyị na-akparịta ụka/Whatsapp: +86 13727391115
Ụlọ ọrụ Tinye: Ala nke anọ nke ụlọ A3, Ụlọ ọrụ New Century, Donghai Village, LongJiang Town, Shunde District, Foshan City, Guangdong Province, China.